Sergio Aguero oo ka hadlay ciyaaryahanka u qalma inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d’Or 2019 – Gool FM
Sergio Aguero oo ka hadlay ciyaaryahanka u qalma inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d’Or 2019
(Yurub) 15 Maajo 2019. Weeraryahanka kooxda Manchester City ee Sergio Aguero ayaa ka hadlay ciyaaryahanka u qalma ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d’Or 2019, maadaama ay dhamaan tartamada waaweyn ee xili ciyaareedkan 2018-2019 ku dhow yihiin in lasoo gaba gabeeyo.
Manchester City ayaa ku guuleysatay horyaalnimada Premier League xilli ciyaareedkan 2018-2019, halka sidoo kale dhamaan kooxaha Barcelona, Juventus iyo Paris St Germain ay ku wada guuleysteen horyaalada La Liga, Serie A iyo France Ligue 1 sida ay u kala horeeyaan.
Sergio Aguero ayaa sheegay in sida uu aaminsan yahay ay tahay in xidigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo midkoodna uusan u qalmin ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d’Or 2019, inkastoo labadan ciyaaryahan ay si joogta ah ugu soo guuleysteen abaalmarintan sanadihii ugu dambeeyay, iyagoo kala heysta min shan abaal marinta Ballon d’Or.
Hadaba weeraryahanka reer Argantina ayaa la weydiiyay qofka uu u arko inuu u qalmo ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d’Or 2019, wuxuuna xaqiijiyay inuu ku guuleysan doono ciyaaryahan ka qeyb qaadan doona finalka Champions League ee ka tirsan midkood kooxaha Liverpool iyo Tottenham.
“Waxaan u maleynayaa in qofka u qalma abaalmarintan waa kan ku guuleysan doona finalka Champions League”.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira magacyo waaweyn ee la filayo inay ku guuleysan karaan abaalmarinta Ballon d’Or 2019, kuwaasoo ku kala sugan kooxaha Liverpool iyo Tottenham, sida Sadio Mané, Maxamed Saalax, van Dijk, Harry Kane iyo Christian Eriksen.